Golaha Shacabka oo loogu yeeray Kulan uu dalbaday Farmaajo - Awdinle Online
Golaha Shacabka oo loogu yeeray Kulan uu dalbaday Farmaajo
Guddoonka Golaha Shacabka ayaa kulan waxaa uu isugu yeeray Xildhibaannada Golaha Shacabka ee mudada xilheyntooda ay dhamaatay, kulankaas oo uu dalbaday Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Qoraal kasoo baxay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxaa loogu yeeray Xildhibaannada Golaha Shacabka inay soo xaadiraan Kulanka Golaha oo dhacaya 1-da Bisha May oo ku beegan Sabtida soo socota.
Sidoo kale Guddoomiye Mursal ayaa faray Xildhibaannada ku maqan dalka dibadiisa iyo kuwa ku sugan Gobolada dalka inay si deg deg ah ugu soo laabtaan Magaalada Muqdisho.
Kulanka Golaha Shacabka ee Maalinta Sabtida ah ayaa waxaa dalbaday oo hortegi doona Madaxeeynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyada oo lagu dhawaaqi doono in laga laabtay muddo kororsigii labada Sano aheyd oo ay Golaha Shacabka horay u ansixiyeen Farmaajana uu saxiixay.
Previous articleFarmaajo oo ku dhawaaqay Go’aan culus oo dhanka doorashada ah
Next articleMareykanka & Midowga Yurub oo qoraal xasaasi ah kasoo saaray doorashada Soomaaliya